के के पर्छन् ? सहकारी व्यवसाय भित्र :: Sahakari Akhabar
के के पर्छन् ? सहकारी व्यवसाय भित्र
काठमाडौं । नेपालको सहकारी आन्दोलनले ६४ वर्ष पार गरेको छ । गत चैत्र २० गते देशभर राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको छ । दिवसले मर्यादित व्यवसायको उठान गरेको छ । अब सहकारीमार्फत व्यवसाय के गर्ने र कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गाइडलाइन बनाउँदै छ ।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनले ५० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्दै आएका छन् । तर सहकारीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवसाय धेरै छन् । यस वर्षको नारा मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी तय गरिएपछि व्यवसायतर्फ सकारीको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
सहकारी पारदर्शी हुन नसक्दा सुसाशन छैन । महांघले सुशासन कायम गर्दै सहकारी व्यवसाय बढाउने योजना ल्याएको छ । सरकारका सचिव गोपीनाथ मैनाली ५ प्रकारबाट सहकारीको व्यवसाय गर्न सकिने बताउँछन् । बचत तथा ऋण (कर्जा र निक्षेपको मात्र कारोबार गर्न गठन भएका संस्था), उत्पादक, उपभोग, बहुउद्देश्यीय र श्रमिक सहकारीले व्यवसाय अघि बढाउन सक्छन् ।
मैनालीका आनुसार उत्पादक सहकारीले कृषि, दूग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, विउविजन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल, पशुपन्छी, माछापालन, अगुवाबालीका काम गर्न सक्छन् । उपभोक्ता सहकारीले उपभोक्ता भण्डार, विद्युत, सञ्चार, स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्न सक्छन् ।
बहुउद्देश्यीय सहकारीले उत्पादन, उपभोग, वित्तीय, श्रम पुँजीमा आधारित स्वरोेजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । श्रमिक सहकारीले हस्तकला, खाद्य परिकार, भोजनालय, श्रम करार विशेषका श्रमसीपमा आधारित संस्था गठन गरी काम गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले मर्यादित व्यवसायभित्र पर्ने सबै विषय समेटेर गाइडलाइन तयार पारिएको बताए । त्यस्तै प्रविधिमा सहकारीलाई जोड्न पनि पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले विविध क्षेत्रमा काम गर्न विशिष्टीकृत सहकारी संघको अवधारणा अघि सारिएको छ । यसको माध्यमबाट सहकारी व्यवसाय गर्न सकिने प्रशस्त संभावना देखिएको सहकारीविद्हरु बताउँछन् । तर नेपालको सहकारी आन्दोलनले सजिलो बाटो रोजेर पैसा किन्ने र पैसा बेच्ने काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै गएपनि अन्य क्षेत्रमा सहकारीको योगदान खुम्चिदैँ गएको छ ।
गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारीले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने भएपनि त्यसो पाइएको छैन । ६४ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाईमा व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील गराउने पहिलो पहल हुनुपर्छ । बिस्तारै अन्य व्यवसायमा काम गर्न थालेको भएपनि सबै छोडेर बचतमै आउने वातावरण आउन नदिन पनि महासंघले भूमिका खेल्नुपर्ने सहकारीकर्मी बताउँछन् ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लिलाप्रसाद शर्मा महासंघको सकार्यमा सहकारीको विकास गर्न सकिने बताउँछन् । ‘महासंघलाई साथमा लिएर काम गर्न सकिए पक्कै पनि छिटो नतिजा आउन सक्छ’ उनले भने,‘हामी सहकार्य गरी अघि बढ्ने पक्षमा छौं ।’